Haweeney Xanuunsan Oo Qofkii U Dhawaadaba Uu Suuxaayo!..Ka bogga Sheekada | Xaqiiqonews
Haweeney Xanuunsan Oo Qofkii U Dhawaadaba Uu Suuxaayo!..Ka bogga Sheekada
Runtii waxa ay mudantahay in lagu magacaabo bugaankii u halis badnaa dunida, waxa ay mudantahay in naaneysa looga dhigo “Haweeneyda Sunta ah” maxaa yeelay qof walbo oo u soo dhawaada iskuna daya in uu daaweeyo waa uu suuxayaa ama ugu yaraan neefta ayaa ku xirmeysa
Gloria Ramirez waxa ay geeriyootay 20 April 1994, dhimashadeedu ma aheyn mid caadi ah, sababtoo ah dhimashadeeda ka dib waxa ay reebtay ha xiraale ku qasbay dhaqaatiirta in ay sameeyaan baaritaano badan.
6 qof oo isku dayday in daweeyaan haweeneyda, ayaa la kulmay xaalado caafimaad oo halis ah, sida miirka oo daboolma, Xubno qalal ama neeefsiga oo adkaaday, taasi oo ugu dambeyntii keentay in dhqaatiirta haweeneydani ay u aqoonsadaan “Haweeneyda sunta ah”.
Waa Tumaa Haweeneydani Sunta ah?
Gloria Ramirez waxa ay aheyd 31 jir u dhalatay Mareykanka, 29 Febaraayo 1994-kii ayaana ay gashay qolka Xaaladaha deg dega ah ee Isbitaal, iyadoo ka cawaneysay Kansarka Ilma-galeenka, wixii ka horeeyey xanuunkeeda waxa ay farxad kula nooleyd qoyskeeda oo ka koobnaa ninkeeda iyo caruur.
Markii la geliyey qolka deg dega ayaa dhamaan shaqaalihii ku sugnaa qolka waxa ay dareemeen ur Cajiib ah
Mid ka mid ah kalkaalisooyinka ayaa isku dayday in ay shaarka ka siibto Gloria, hase ahaatee waxa ay aragtay jirka bugaanka oo aad u ifiya, islamarkaana waxa afkeeda ka soo baxaayey shiirka Toonta.
Dhamaan Shaqaalihii Oo Xanuunsaday
dhalaalka iyo shiirka ka soo baxaayey jirkeeda, kaliya ma aheyn wixii ay ku caan baxday Gloria, waxaa intaasi dheereyd markii la isku dayey in dhiigga laga qaado waxaa miir daboolmay kalkaalisidii, ka dibna kalkaaliso labaad ayaa iyadana isku dayday, iyadana dhulka ayey ku dhacday, qof walboo oo isku daya daawenteedana waxa uu la kulmay xaalad halis ah.
Maxaa Ka Qaldanaa Gloria Ramirez?
Ka dib markii ay geeriyootay koox gaar ah ayaa la xilsaaray baaritaanka howshan, kooxdii baaritaanka ayaana ugu dambeyntii soo ogaaday in Gloria Ramirez ay isticmaali jirtay kimimkada Dimethyl sulfoxide(DMSO)iyo sidoo kale daawo dhireed.
dadka isticmaala maadan ayaa sheegay in dhadhanka maadan uu la mid yahay kan toonta,sidoo kalee maadan ayaa waxaa lagu keydiyaa maqaarka hostiisa qaabka dufinta oo kale ah.
Dhanka kale jaamacadda “Livemore University” ayaa mala awaashay in maadadan ay ka bixi weysay jirka Gloria maadaama kilyaheeda aysan si wanaagsan u shaqeeyneyn taasi oo keentay in jirka bugaanka ay buuxdhaafiso maadada DMSO.
Waxaa xusid mudan in maadada Dimethyl sulfoxide ay si iskeed ah u tahay sub, waxaana la aaminsanyahay in taasi ay sabab u aheyd xanuunkii ku yimid shaqaalaha.